Taksiilayaasha oo dhibaatooyin la kulma. | Somaliska
Darawalada Taksiyada ayaa la kulma dhibaatooyin iyo cagajugleyn kala duwan waloow kaamirooyinka lagu xiray gawaarida ay yareysay dhibaatadaas. Sveriges Radio ayaa baahiyay in sanadkaan 5tii taksiilaba hal ka mid ah loo cagajugleeyay halka 10kiiba hal dhibaato gacan ka hadal ah loo geystay. Dadka cabsan ama daroogada isticmaala ayaa dhibaatada ugu badan ku haya darawalada. Ayadoo qaasatan darawalada da'da yar ee ajanabiga ah ay qatarta ugu wayn la kulmaan. Warbixinta ayaa sidoo kale soo bandhigtay in taksiilayaasha ka shaqeeya magaalooyinka waaweyn ay ka khatar badan yihiin kuwa kale. Si kastabada ha ahaatee, dhibaatada ay la kulmaan taksiilayaasha ayaa hoos u dhac ku yimid 10 kii sano ee la soo dhaafay. Sveriges Radio.
Taksiilayaasha oo dhibaatooyin la kulma.
Darawalada Taksiyada ayaa la kulma dhibaatooyin iyo cagajugleyn kala duwan waloow kaamirooyinka lagu xiray gawaarida ay yareysay dhibaatadaas.
Sveriges Radio ayaa baahiyay in sanadkaan 5tii taksiilaba hal ka mid ah loo cagajugleeyay halka 10kiiba hal dhibaato gacan ka hadal ah loo geystay.
Dadka cabsan ama daroogada isticmaala ayaa dhibaatada ugu badan ku haya darawalada. Ayadoo qaasatan darawalada da’da yar ee ajanabiga ah ay qatarta ugu wayn la kulmaan. Warbixinta ayaa sidoo kale soo bandhigtay in taksiilayaasha ka shaqeeya magaalooyinka waaweyn ay ka khatar badan yihiin kuwa kale.
Si kastabada ha ahaatee, dhibaatada ay la kulmaan taksiilayaasha ayaa hoos u dhac ku yimid 10 kii sano ee la soo dhaafay.